Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno-jir ah waxaana shalay galmo la sameeyay saaxiibkayga markii ugu horaysay. Waxaan jeclaystay in aan ka qubeysto kadib galmada, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan nadiif ahaado. Laakiin ma hubi in uu saaxiibkayga midaasi u arkayo in ay tahay dabaalnimo iyo inkale. Dadka kale maxay sameeyaan? – Tips for refugees
Anigu waxaan ahay gabar 17-sanno-jir ah waxaana shalay galmo la sameeyay saaxiibkayga markii ugu horaysay. Waxaan jeclaystay in aan ka qubeysto kadib galmada, sababtoo ah waxaan doonayaa in aan nadiif ahaado. Laakiin ma hubi in uu saaxiibkayga midaasi u arkayo in ay tahay dabaalnimo iyo inkale. Dadka kale maxay sameeyaan?
Waa caadi in aad sidaan u fikirtid.
Gaar ahaan marka aadan ahayn qof khibrad baddan arintaas u leh.
Fikradahaaga ku saabsan nadaafada kadib galmada waa kuwo sax ah.
Laakiin waxaad xoogaa sii joogi kartaa sariirta si aad u heshid habsiin.
Kadibna aad musqusha si aad usoo qubaysatid.
Hareeraha xubinka taranka dumarka waa meel xasaasi ah.
Dhakhtaradu waxay dhahaan in ay dumarku waajib ku tahay in ay aadaan musqusha kadib galmada.
Gudaha 30 daqiiqado.
Sababtoo ah ilinka kaadida wuxuu qaadi karaa caabuq.
Midaas oo horseedaysa in caabuq ku dhaco kaadihaysta.
Sidaas darteeda waa muhiim in aanan la sugin muddo dheer kadib galmada.
Dadku way kala duwanyihiin qofkastana wuxuu sameeyaa waxyaabo kala duwan.
Adigu waad ogtahay jirkaaga.
Samee waxa adiga kuu wanaagsan.
Arintaana waxaad kala hadli kartaa saaxiibkaaga.
Kadibna wuu fahmi doonaa sababta aad u kacdid una aadid musqusha kadib galmada.
Previous Previous post: Dhammaan saaxiibadaydu waxay ku jiraan barnaamijka Lovoo. Maxay tahay midaasi?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 16-sanno-jir ah waxaana galmo la sameeyay saaxiibtayda. Waxaana kasoo bixiyaa xubinkayga taranka xubinkeeda taranka kahor inta aan biyo iga imaanin. Waxaana kaliya galmo samaynaa waxyar kadib marka uu dhiiga caadada ka istaago. Ama waxyar kahor inta aan la gaarin muddada dhiigeeda caadada ee xigta. Ma dhici kartaa in ay weli uur qaado?